Inkakha ithi ukufika kukaSangweni kuphendule imithandaza yabaningi | News24
Inkakha ithi ukufika kukaSangweni kuphendule imithandaza yabaningi
Johannesburg – Lowo owayedlalela i-Orlando Pirates, uPhumudzo Manenzhe, ukholelwa ekutheni ukufika kukaThamsanqa Sangweni kuleli qembu yiyo kanye into ezosiza le kilabhu.
Ngasekuqaleni kwaleli sonto iPirates iqinisekise ukusayinisa uSangweni inkontileka yeminyaka emithathu esuka kuChippa United, nokungumnyakazo othakaselwe kakhulu ngabalandeli beZimnyama, kubika iKickOff.com.
U'The Bold', owayedlalela iPirates phakathi kuka-2002 no-2007, ukholelwa ekutheni ukufika komdlali wasesiswini okuleli zinga kuyiphendula yonke imikhuleko yabalandeli njengoba befuna ukuthi iqembu libuyele emgqigqweni omuhle.
Lokhu kulandela ukuthi iPirates iphoxile kule sizini esanda kuphela yaqeda ngaphandle kweTop 8, okuyinto engakaze yenzeka emlandweni we-PSL.
OLUNYE UDABA: USangweni usemenyezelwe njengokaputeni weChippa
"Ngicabanga ukuthi ukufika kukaThamsanqa Sangweni kuchaza ukuthi imikhuleko yamaBhakabhaka iphenduliwe, ngoba ngesizini eyedlule bebekhala ngokuthi isisu asiqinile nokwenele," kusho uManenzhe.
"Siyazi ukuthi amandla ePirates asekudlaleni emaphikweni, kepha ukuze abadlala kule ndawo bathole ibhola kumele siqine sithi ngqi isisu ukuze sikwazi ukuphakela abanye ibhola.
“Ngicabanga ukuthi uSangweni uzofika nakho konke lokhu okubukeka kushoda. Unamaqhinga amaningi uma kuyiwa ebhokisini nasekubhakuziseni inethi. IPirates izojabula kakhulu ngokuba nomdlali ofana nye.”